September | 2011 | Aung Ko Htwe Personal Website
everton Vs liverpool everton also good with spurs matchs , liverpool weak in midfield … eg.spurs first goal lucus +charlie adam +? kurit ? wings handerson / downing back no mistake spurs Vs arsenal arsenal back4+ midfield understanding … Continue reading →
အရင်တစ်ပတ်က မရေးဖြစ်တာကြာတော့ ရေးလိုက်တာ အားပေးကြပါတယ် မြှောက်ပေးတာလားတော့မသိ … အလကားပြောတာ …ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ******************************** ECONOMY လုပ်ငန်းသေး ၊ လုပ်ငန်းလတ်တွေကို လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်အောင် လမ်းဖွင့်ပေးရမယ် ******************************** လုပ်ငန်းကြီးတွေ ကို လွယ်လွယ် မပြိုလဲအောင် လုပ်ဆောင်ရမယ် ******************************** အကပ်အရပ် နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ဖယ်ရှား ၊ တားဆီး ၊*** အမြင် မစောင်းအောင် တည့်မတ်ပေးရမယ် *** ********************************* စတော့ရှယ်ရာဈေးကွက်ဆီ ဦးတည်ထားရမယ် ********************************* JVC *** important မြန်မာနိုင်ငံ … Continue reading →
CHAMPION LEAGUE Napoli Vs Villa real Lyon Vs Zagreb Valencia Vs Chelsea valencis need one stable form chelsea need balanse defense and ofance Arsenal Vs Olympiacos arsenal this match important Marseille Vs Dordmond two teams takecare others matchs
Lee hyo re
Yu na kim / i sent mailှု
Barbara palvin မျက်နှာမလှည့်ဘူး… တံခါးမပါဘူး … ********************** ဖိနပ် ခုံ …မျိုးကြီးဗီစီဒီ *********************** အင်္ကျီ…အိုင်လပ်ယူ…ရှပ်ရှင်တူတယ် သက် .. *********************** ဂျင်းအင်္ကျီ..ပခုံးတင်ကိုင် … ရိုးရိုးပဲ poster ကပ်လိုက်တာ အောင် – -/ ဗီစီဒီ ကြ တစ်မျိုးထင် ပြီး ရိုက်ပြန်ရော သံသရာလည်နေတာ *** ၂၀၀၆ နောက်ပိုင်းတော့ နည်းနည်း pressure ရှိတယ် တမင် သိပ်မဖန်တီးရတော့ဘူး … 67 … Continue reading →
Cheryl cole လက်
Park shin hye လက် မှတ်ထိုး ပွဲ *********************** Latest tv serie Heart strings နှလုံးသားချစ်ကြိုးသံစဉ် ***********************
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဧရာဝတီ တစ်ခုတည်း ရွေးခြယ်ခွင့်ရှိတဲ့ နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူး *** ရှောင်ပြီးရွေးလို့လည်းရပါတယ် နောက်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဘက်ကကြည့်ရင်လည်း ဧရာဝတီ ဟာ အရင်နဲ့ မတူတော့ဘူီးသိသိသာသာ ယိုယွင်းလာနေတယ် ရေတိမ်ပြီး မြစ်ကြောင်းကျဉ်းလာတယ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျဉ်နဲ့ပတ်သက်ရင် စိုးတာတွေကနောက်မှသိရတော့ စဉ်စားလေတိုင်ပင်လေ ကောင်းလေပဲ *** ရောင်းချမှုဆိုရင်လည်း မီးပျက်ချိန် ရှိသေးတယ် ဖွံဖြိး ဆဲနိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ် မီးလိုအပ်တွေရှိလာအုံးမယ် နွေဆိုပို ဆိုးတယ် *** မီးမရသေးတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးပဲ *** အောက်ခြေထိသိရှိ မှုတွေလည်လိုအပ်တယ် ကြိုးစားနေတာတွေလည်း တွေ့ ရပါတယ် *********************************** … Continue reading →